Zụta Mkpụrụ Igestrol Acetate (2919-66-6) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Melengestrol acetate ntụ ntụ
Rating: SKU: 2919-66-6. Category: Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Melengestrol acetate powder (2919-66-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Melengestrol acetate ntụ ntụ (INN, BAN) bụ progesin steroidal na antineoplastic na-azụ ahịa. Mgbe ụfọdụ, a na-ebelata dịka MGA. A gaghị anabata ya maka ụmụ mmadụ, a na-ejikwa ya mee ihe dị ka ihe oriri na-eri nri iji kwalite ọganihu nke ehi. a na-eji ya eme ihe dị ka ọgwụ mgbochi egbochi maka ụmụ anụmanụ ndị a dọtara n'agha na zoos na ụlọ ndị ọzọ, ..
Melengestrol acetate ntụ ntụ isi agwa
aha: Melengestrol acetate ntụ ntụ
Usoro Molecular: C25H32O4
Molekụla arọ: 396.52
Melt Point: 202-204 Celsius C (gbaa.)
Alpha D23 -127 Celsius (c = 0.31 na chloroform)
Nche Temp .: 0-6 ° C
agba: Ìhè odo powder
More Details Na Melengestrol acetate ntụ ntụ ị chọrọ ịmara
Melengestrol acetate ntụ ntụ, Heifermax, MGA
Kedu ihe eji eme ihe nke Melengestrol acetate ntụ ntụ
Melengestrol acetate powder (MGA) bụ ụbụrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma iji meziwanye ọnụ ọgụgụ na-eto eto na arụmọrụ na-agbanwe nri. Na-egbochi ostrus na beef heifers .Anyị anabataghị ha maka ụdị ọ bụla. MGA bụ nanị ụdị ọgwụ ọjọọ nke a na-enye na nri anụ, Nlekọta nke usoro a kwadoro bụ 0.25 ka 0.50 mg / cow / day. A na-eri mmanụ na-eme ka a na-enye Melecestrol acetate maka oge oge fattening / na-emecha, na-abụkarị 90 ka ụbọchị 150. A na-etinye akwụkwọ ikike nke ụbọchị 2 tupu e gbuo ya na anụmanụ ọ bụla a na-elekọta MGA.
A na-atụlerịrị ngwongwo acro acetate nke Melengestrol na nzuko 54th nke Kọmitii ahụ, na-atụ aro oke fọdụrụ n'ogologo (MRL). MRL ndị a na-adịru nwa oge bụ 5 μg / kg maka abụba bovine na 2 μg / kg maka imeju bovine. N'igosi mkpebi ya na MRL, Kọmitii ahụ tụlere ihe ndị a:
- E guzobere ADI nke 0-0.03 µg / kg nke ibu ahụ, nke dabara na ADI kachasị nke 1.8 µg maka a
- Naanị abụba na imeju nwere mgbatị nke ihe nrịba ama nke a na-ahụ ọnụ ọgụgụ na-agbaso; ụzọ
enweghi oke ihe kariri 0.3 μg / kg ka enweghi ike ikpuchi ihe ndi ozo na akwara si
ụmụ anụmanụ na-emeso ọgwụ doses nke Melengestrol acetate ntụ ntụ.
- Ndị nkwado ahụ nyefere usoro nyocha nke dabara adaba maka nyocha.
Ya mere, Kọmitii ahụ kwadoro MRL oge a ma rịọ maka ozi ndị a:
- Usoro nyocha nke kwesiri ịkọwapụta ihe fọdụrụnụ nke Melengestrol acetate ntụ ntụ n'ime imeju na abụba.
Na nzaghachi nke arịrịọ Kọmitii ahụ, onye nkwado ahụ nyere usoro kemịkalụ emere maka nyocha site na 58th
Melengestrol acetate ntụ ntụ dị irè
Mmetụta nke nwoke meningenyl acetate (MGA) bu nke a na-amu ihe banyere umuaka nwoke na nwanyi. Onu ogugu 264 natara 98 mg MGA kwa ubochi maka oge di mkpirikpi (0.4 ka 18 days), na oru nke ovary kpebiri site na ngbado ala. Ebe ọ bụ na ọnụọgụ nke corpus luteum na-arịwanye elu si na 32% gaa na 76%, ihe a na-achọpụta na-emepụta ihe na-esiwanye na 10% gaa na 56%. Igwe uzuzu uhie na-abawanye n'oge. A na-agbanye ihe nkedo dị ka ụdị ụbụrụ dị, dịka a na-atụgharị ya dị ka ụbụrụ nke estrogenic ma ọ bụ na-eme mgbe ọ na-abaghị uru luteum, ọ bụ ezie na ọgwụ MGA na-egbochi ya na ịjụ nwa.
A chịkọtara nne ehi 166 na-amụ ihe ogologo oge banyere ọgwụgwọ MGA (ụbọchị 105 ruo ụbọchị 116). A chọpụtara mmụba (P <0.05) na ibu nke mmiri mmiri follicular, ọkachasị site na nnukwu follicles nke ụzọ ovaries a. Estrịbawanye estrogen etoju na-egosikwa ntozu oke, na ogo adrenal dị na heifers mesoro na-abawanye. Mgbe ị gwọchara MGA, ịdị arọ nke heifers jetted na-ebelata. Thedị kachasị mma maka ọrụ ịbawanye ụba yiri ka ọ dị nso na 0.4 mg nke MGA kwa ụbọchị / nwa ehi.
Ịdọ aka ná ntị na Melengestrol acetate ntụ ntụ
Zere nri, ihe ọṅụṅụ na nri anụ.
Enwela ike n'ime drains.
A ghaghị iwepụta ihe a na akpa ya n'ụzọ dị nchebe.
Yiri uwe nchebe kwesịrị ekwesị.
Yiri uwe kwesịrị ekwesị.
kpoo ala na ihe nile ndi emeruru site na ihe a, jiri mmiri na di.
Ọ bụrụ na emetụ ya, Kpọọ ozugbo na kọntaktị Doctor or Poisons Information Center. (gosi akpa ma ọ bụ akara a).
Zere ikpughe - nweta ntuziaka pụrụ iche tupu ojiji.
Wepụ ihe a na akpa ya na ebe nchịkọta ihe mkpofu ma ọ bụ nke pụrụ iche.
Jiri igbe kwesịrị ekwesị iji zere mmebi gburugburu ebe obibi.
Zere ịhapụ ebe obibi. Gaa na ntụziaka pụrụ iche / nchekwa data nchekwa.
Melengestrol acetate ntụ ntụ Marketing
A ga-enye ha n'ọdịnihu na-abịa
Otu esi esi zụta Melengestrol acetate ntụ ntụ si AASraw